आहा ! मात्र १९ रुपैयाँ घर ? अनि घर किन्नेलाई ६ लाख पनि ?(हेर्नुहोस ) – Sunaulo Nepal TV
आहा ! मात्र १९ रुपैयाँ घर ? अनि घर किन्नेलाई ६ लाख पनि ?(हेर्नुहोस )
घर किन्नु परे कति पैसा पर्ला ? शहर बजारमा भए करोड घटिमा के आउला । पहाडि वा तराइका गाउँमा समेत घर किन्न लाखौं तिर्नु पर्दछ । तर विश्वमा एक यस्तो स्थान छ, जहाँ केवल १९ रुपैयाँमा घर आउँछ । त्यो पनि विकसित मानिएको युरोपेली देश क्रोएसियामा ।
सुन्दा पत्यार नलाग्ला, तर पूर्वी युरोपेली देश क्रोएसियामा केवल १ क्रोएसियन कुना अर्थात नेपाली १९ रुपैयाँमा घर किन्न पाइन्छ । त्यो पनि चानचुने होइन, १५०० वर्गफुटमा फैलिएका घर । रोयटर्सका अनुसार क्रोएसियाको लेग्राड नामक शहरमा अहिलेसम्म यहि दरमा १७ वटा घर बिक्रि भइसकेका छन् ।
लेग्राड ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको शहर हो । जसको जनसंख्या केवल २ हजार २५० छ । यस्तोमा शहरको जनघनत्व कम नहोस् भनेर यहाँका घरलाई यति सस्तोमा बेच्ने निर्णय गरिएको हो । लेग्राडका मेयर इभान साबोलिकका अनुसार यहाँ यातायातको सुविधा नगन्य छ ।
यस शहरमा घर किन्न भने केही सम्झौताहरु गर्नु पर्ने हुन्छ । सम्झौतामा घर किन्ने व्यक्ति १५ वर्षसम्म त्यही शहरमा बस्नुपर्छ । यस्तोमा पुराना भएका घरको मर्मत सरकारले गरिदिनेछ । यतिमात्र होइन, नयाँ जीवन सुरु गर्न घर किन्ने व्यक्तिलाई ३५ हजार कुना अर्थात ६ लाख ६३ हजार भन्दा बढि रुपैयाँ पनि दिइनेछ ।
Previous बिराटनगरमा अनौठो घट्ना : आइसक्रिम र बिस्कुट खाएर होटल छिरेका थिए प्रेमी र प्रेमिका….
Next भाग्यले बाँचेका यी बृद्ध जस्ले घटनाको बारेमा एकएक खुलाए (भिडियो सहित)